१८ घण्टाको मेकअपपछि यस्ता बने प्रसिद्ध बलिउड अभिनेता, के तपाइँले चिन्नुभयो ? – Dcnepal
१८ घण्टाको मेकअपपछि यस्ता बने प्रसिद्ध बलिउड अभिनेता, के तपाइँले चिन्नुभयो ?
प्रकाशित : २०७९ असार ४ गते १५:४०
काठमाडौं । ब्लकबस्टर बलिउड फिल्म थ्री इडियट्सका फरहान कुरैशी अर्थात अभिनेता आर माधवन आफ्नो आगामी फिल्म रकेटरीः द नाम्बी इफेक्टको रिलिजको तयारीमा छन् । यो बायोग्राफिकल ड्रामाका लागि माधवनले निकै मेहनत गरेका छन् ।
यसका लागि उनले लुक बदले, तौलमा काम गरें र घण्टौंसम्म मेकअप गरेर आफूलाई क्यारेक्टरमा फिट बनाइदिए । यी मेकअप शेड्युलको भिडियो सेयर गर्दै आर माधवनले आफूले कति घण्टा मेकअप गर्नुपरेको बताए । योसँगै उनले यो अवधिमा आफूले के के बकवास गर्थे भन्ने पनि बताए ।
आर माधवनले दाह्री-जुँगा र कपालमा रंग लगाएको भिडियो सेयर गरेका छन् । यो भिडियो फिल्मको सुटिङको क्रममा हो । यो सेयर गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘जब म मेकओभरको लागि १८ घण्टा कुर्सीमा बस्ने गर्थे, तब मलाई थाहा छैन के गर्थे । भिडियोमा उनी आफ्नी श्रीमती सरितालाई भन्दै देखिएका छन्– ‘नमस्ते सरिता, जब म बूढो हुन्छु, म यस्तो देखिनेछु । यो तपाईको जानकारीको लागि मात्र हो। यसको फोटो खिच्नुहोस् र राख्नुहोस्।’
अब माधवन बुढेसकालमा कस्तो देखिनेछन् भन्ने थाहा छैन, तर हो, उनले फिल्ममा आफ्नो बुढो चरित्रको लागि उत्कृष्ट मेकओभर गरेका छन्। माधवनको समर्पणको प्रमाण पनि यो भिडियो मार्फत उपलब्ध छ। १८ घण्टा कुर्सीमा बस्नु सानो कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा माधवनको यो समर्पण सराहनीय छ ।
आर माधवनको फिल्म रकेटरी: द नाम्बी इफेक्ट पूर्व वैज्ञानिक र इसरोका एरोस्पेस इन्जिनियर नाम्बी नारायणको जीवनमा आधारित छ। फिल्मको कथा, निर्माण र निर्देशन आर माधवनले नै गरेका हुन् । चलचित्रको समग्र कमाण्ड सम्हाल्नुका साथै उनी मुख्य कलाकार पनि हुन् । यो फिल्म तेलुगु, मलयालम, कन्नड लगायतका भाषामा जुलाई १ मा विश्वभर रिलिज हुनेछ ।